News | Buzzy
Auto Love Beauty Books Business Celebrities Communication Crime Entertainment Fashion Friendship Health History Knowledge Life Style Living Mobile Movies Music Myanmar Other Politic Sports Tech Travel Video Games Weired
သူများမင်္ဂလာဆောင်မှာ ဒီလိုကြီးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး ...
သုသု(ညီညီမောင်)မွေးနေ့ပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မထောက် ဝမ်းစာအတွက် ဈေးပတ်ရောင်းနေရတဲ့ အမေအို
လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဗိုင်ဗရေတာအဖြစ် မကြာမှီ အသုံးပြုနိုင်တော့မည်
စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ vibration (တုန်ခါမှု) ကို အသုံးပြုပြီး မိမိရဲ. လက်ကိုင်ဖုန်းကို ဗိုင်ဗရေတာအဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မယ့် ဖုန်းအပိုပစ္စည်း မကြာမှီထွက်ရှိလာပါတော့မယ် ။
30 Nov, 02:57 PM
နံရိုး ခြောက်ချောင်းကို ဖယ်ရှားပြီး ကာတွန်းရုပ်နဲ့ တူအောင်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
သင်ဆိုရင်ရော ဒီလိုရူးမိုက်တာမျိုး လုပ်မှာလား ?
29 Nov, 06:08 AM
လျှို.ဝှက်စစ်စခန်း Area 51 အနီးမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ပုဂံပြားပျံ(UFO)တွေကို လေယာဉ်စီးခရီးသည်က ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ခဲ့
လျှို.ဝှက်စစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Area 51 အနီးမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ ပုဂံပြားပျံ(UFO)တွေလို့ ယူဆရတဲ့ တောက်ပလွန်းတဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ထူးခြားတဲ့ စက်ဝိုင်းပုံကို လေယာဉ်စီးခရီးသည်က ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
The Angel of Death : ဒါမှမဟုတ် ISIS ၁၅၀၀ ကျော်ကို သတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တကယ့်ဘဝထဲက ရမ်ဘို
24 Nov, 07:15 PM
သင့်အနေနဲ့ အင်တာနက် Data ပမာဏ ဘယ်လောက်သုံးပြီးပြီလည်းဆိုတာ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးမယ့် app
မိမိအင်တာနက် ဒေတာ ဘယ်လောက်သုံးပြီးပြီဆိုတာကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိရှိနိုင်မယ့် App လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ် ။
6 Nov, 04:08 PM
လောက်ကိုင်မြို.မှာ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှာ လျှပ်စစ်ကားများဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
5 Nov, 12:35 PM
အမျိုးသားထောင်သို့ပြောင်းပေးရန် လိင်ပြောင်းထားသော အမျိုးသမီး၏လျှောက်ထားချက် ပယ်ချခံရ
တာရာဟပ်ဒ်ဆင်ဟုအမည်ရ သော အဆိုပါအမျိုးသမီး၏ဖြစ်စဉ် ကြောင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ၎င်းင်းကိုထောင်ပြောင်းရွှေ့ပေးရန်တောင်း ဆိုလာကြသည်။
4 Nov, 06:58 AM
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဆင်အပြေဆုံး app တစ်ခုဖြစ်သော Yway(ရွေး)
ယနေ့အင်တာနက်ခေတ်ကြီးတွင် ထိုင်ရာမထ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကြောင်း ၊ ပါတီများအကြောင်း နှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အားလုံးကို မိမိတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတဆင့် လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်ဖို့
3 Nov, 09:16 AM
No Bra Day အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ရင်သားကင်ဆာအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် နဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာအတွက် လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ရန် တိုက်တွန်းကြပါတယ် ။
3 Nov, 09:12 AM
Facebook မှာ Profile Video အသုံးပြုနိုင်နေပါပြီ ၊ ဘယ်လို အသုံးပြုရမှာပါလည်း ?
Facebook မှာ Profile Video အသုံးပြုနည်း
3 Nov, 09:10 AM
Facebook တွင်Like ခလုတ်အပြင် စိတ်ခံစားမှု ဖော်ပြသည့် Reaction ခလုတ်သစ်များ သုံးနိုင်တော့မည်
Facebook သည် လက်ရှိ ရှိရင်း စွဲ Like အပြင် Reaction ဟုခေါ်သည့် စိတ်ခံစားမှုပြ သင်္ကေတ ၆ မျိုးကို သတ်မှတ်ထားသော ဒေသများအတွင်း စမ်းသပ်ကာလအနေဖြင့် အသုံးပြု ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
3 Nov, 09:08 AM
3 Nov, 09:06 AM
မိမိတို့ဟာ ဓါတ်ပုံကောင်းတွေကို ရယူရိုက်ကူးနိုင်သယောင် ညာရွှီးနေတဲ့ Instagram ဓါတ်ပုံတစ်ချို.
Instagram မှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ တင်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတိုင်းဟာ ကြည့်လို့ကောင်းပြီး အလွန်အဆင်ပြေလှပါတယ် ၊
3 Nov, 09:02 AM
Sony Xperia Z5 အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
Sony Xperia Z5 အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း လေ့လာရအောင်ပါ
3 Nov, 08:55 AM
၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် EISA မှရွေးချယ်သော အကောင်းဆုံး ဖုန်း (Mobile) နှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ
အခုဖော်ပြပေးမှာ Mobiles Devices Awards ဆိုတဲ့ ဆုအောက်မှာ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့စပ်ဆက်ပစ္စည်းတွေ အကြောင်းပါပဲ
3 Nov, 08:51 AM
အပြာကား ကြည့်လွန်းသူတွေက ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ဟုဆို
မြန်မာဝတ်စုံလေးကိုယဉ်ယဉ်လေးဝတ်ထားတဲ့ မေမီကိုကိုရဲ့ နန်းဆန်တဲ့အလှ